Zaw Hein Interview | Blog - Knowledge, Career, Family
MSI's Scholarship Application Form Download
Welcome To MSI
Tokyo Foreign Language Academy
SEGi University Malaysia
Sunway University Malaysia
Limkokwing University Malaysia
The University of Westminster Malaysia
KDU College Malaysia
Reliance College Malaysia
AIMST University Malaysia
International Medical University Malaysia
PSB Academy Singapore
Nanyang Institute of Management Singapore
SIM University Singapore
MDIS University Singapore
Green River Community College USA
Hightline Community College USA
LSC Malta London
One Stop Quality Service
MSI and SIm EventtMSI and MDIS eventMSI and BHMS eventMSI and JCU eventMSI 9th Exhibition
Zaw Hein Interview
Jan 18 2018 MSI Admin 0
၀ါသနာကိုအရင်းခံတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုသာ ရွေးချယ်ပါလို့အကြံပြုခဲ့ တဲ့ပီနန်မြို့ရှိ KDUကျောင်းရဲ့ပညာသင်ဆု(၈၀%) ကိုကျောင်းလခကင်းလွတ် ခံစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ MSI ကျောင်းသားမောင်ဇော်ဟိန်းအင်တာဗျူး။
၁။ အမည် ၊ အသက် ၊ နေရပ်လိပ်စာ ။
ဇော်ဟိန်း ၊ အသက် (၂၄ )နှစ် ၊ အမှတ် ( ၉ ) ချမ်းသာလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ပညာအရည်အချင်း။
ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှာ တတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၃။ ယခုတက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းအမည်နဲ့ဘာသာရပ်။
ပီနန် ( Campus ) KDU International University College မှာ Diploma in International Hotel & Tourism
၄။ KDU(ပီနန်) University College ကိုဘယ်လိုသိပြီး ကျောင်းတက်ဖို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။
KDU(ပီနန်)University College က (၈၀%) အထိ Scholarship ပေးတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ် Myanmar Search International (MSI) ကသိခဲ့ရတယ်။
(MSI)ကကျောင်းတွေအများကြီးနဲ့ချိတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားသူငယ်တွေကို ပညာသင်ဆုတွေ၊ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေ လျှောက်ပေးနေတဲ့ Company တစ်ခုဆိုတာသိရတဲ့အတွက် (MSI) နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာရေး၊ လူမျိုးဓလေ့ထုံးစံသိပ် ပြီးမကွာခြားတဲ့ ပီနန်မြို့က KDU ကျောင်းကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
၅။ ပညာသင်ဆုရရှိပုံ၊ ပညာသင်ဆုရရှိအောင် (MSI) နဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပြီးလျှောက်ထားခဲ့လဲ။
KDU တက္ကသိုလ် (ပီနန်) Campus ကကျောင်းလခ (၈၀%) ကိုပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခံစားခွင့်အနေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ (၁၀)တန်းအမှတ်စာရင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို (MSI) ရဲ့အကူအညီနဲ့လျှောက် ထားခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Visa ကိစ္စ၊ Scholarship လျှောက်တာတွေနဲ လေယာဉ်လက်မှတ်အစ ကျောင်းရောက်ပြီး နေထိုင်ဖို့အထိ MSI ကအစအဆုံးကူညီမယ်ဆိုတာသိခဲ့တဲ့အတွက် MSI နဲ့ပဲသေချာဆွေးနွေးပြီးလျှောက်ထား ခဲ့တာပါ။
၆။ မလေးရှားပညာရေးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ရတဲ့အကြာင်းအရင်း။
မလေးရှားကလူမျိူးဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိတော့ လေ့လာစရာများတယ်။ ပညာရေးစနစ်ကလည်းနိုင်ငံ တကာစံချိန်မှီတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း
အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲသင်ရတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတွေများတော့ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ပြန် သင်ပေးတော့ကျေနပ်အားရတယ်။ ပီနန်မြို့မှာကမလေးရှားနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ တရုတ်လူမျိုး (၉၀%) ကျော် ရှိတဲ့ အတွက်တရုတ်ဘာသာစကားကိုလည်း နေရာတိုင်းမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ သင်နေတာကို ထိုင်ကျက်မတ်နေတာနဲ့မရဘူး။ လေ့လာစရာတွေအရမ်းများတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေ့လာ စရာတွေကိုလည်း ဒီရောက်မှကျွန်တော်သိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ကြားခဲ့တာနဲ့လည်းမတူဘူး။ လာသင်ကြည့် မှသိမှာပါ။
၇။ ပြည်ပမှာ Diploma in International Hotel & Tourism Management ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်သင်ယူဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်လဲ။
အင်္ဂလိပ်ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးလို့ ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။ တချို့ကသင်တန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ အချိန်တွေအ များကြီးယူတက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့သိပ်ပြီးအားမပေးချင်ဘူး။ အချိန်အလဟသတ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။အင်္ဂ လိပ်စာလေ့လာသွားပါ။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ကို လေ့လာသွားပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျန်တာကတော့ ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုအပိုင်းရယ်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးနားလည်မှု Positive Thinking ရှိဖို့နှင့်ယဉ် ကျေးမှုဓလေ့ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။
၈။ ပီနန်မြို့ရဲ့အနေအထားနဲ့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသူ/သားတွေအတွက်ကျန်းမာရေး အာမခံချက်ရှိမရှိ။
ပီနန်မြို့ကတရုတ်မြို့လို့ ပြောရင်တောင်ရပါတယ်။ (၉၀%)ကျော်ကတရုတ်လူမျိုးတွေပါ။ ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနည်း နည်းကတော့ Indian နဲ့ Malay လူမျိုးတွေပါ။ အားလုံးနီးပါးတရုတ်လူမျိုးတွေပါ။ တရုတ်စကားတက်တဲ့ ကျောင်းသူ/သားတွေဆို နေထိုင်ရေး၊သွားလာရေး ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ပီနန်မြို့ကကျွန်းနိုင်ငံဆိုတော့နယ်မြေက သိပ်မကြီးဘူး။ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ နယ်မြေသန့်တယ်။ ကျောင်းသား Visa နဲ့နေတာဆိုတော့ ပိုလုံခြုံစိတ်ချရ တယ်။ ကျောင်းက AIA Health Insurance Card ပေးတယ်။ ကျောင်းတက်နေတဲ့အတောအတွင်း Accident တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဒါမှမဟုတ် Operation တစ်ခုခုလုပ်ရရင် ဆေးရုံတက်ရတဲ့စရိတ်၊ခွဲစိတ်မှုစရိတ်ပေးစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်သောက်မယ့်ဆေးဖိုးပဲပေးရတယ်။ နိုင်ငံခြားကျောင်းသူ/သားတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကအစအဆင်ပြေ တယ်။ ကျန်းမာရေး Card အတွက်လည်းပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး။ အာမခံချက်အပြည့်ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့သွားပြီးဆွေးနွေးလို့ရလို့ ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။
၉။ Scholarship ပေးနေတဲ့ KDU (ပီနန်) ကျောင်းကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲ။
British Council မှာစာဖတ်နေတဲ့အသိတစ်ယောက်က Myanmar Search International (MSI) Oversea Education ကိုပြောပြလို့သိခဲ့တာပါ။
၁၀။ Sule Shangri-La Hotel မှာ Internship(အလုပ်သင်) လုပ်ရင်းနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ ကာလကြာချိန်။
Sule Shangri-La Hotel ၀န်ထမ်းအားလုံးက သဘောကောင်းကြပြီး သိသမျှအကုန်ပြောပြသင်ပေးလို့ လုပ်ငန်း
ခွင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း Sule Shangri-La ကအကိုအမတွေ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တဲ့ပညာတွေနဲ့ အဲဒီကအကိုအမတွေနဲ့ အပြန်အလှန် Sharing လုပ်ခဲ့တယ်။ ကြာမြင့်ချိန်ကတော့ Food & Beverage မှာ(၃)လ၊ Events Sales မှာ(၃)လ စုစုပေါင်း (၆) ကြာပါတယ်။
၁၁။ ကျောင်းတက်ရင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖြေရှင်းခဲ့လဲ။
အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကွဲပြားမှု၊ အစားအသောက်အရသာကွဲပြားမှုတွေ၊ ပိုက်ဆံသုံးစွဲရတာ၊ အိမ်လွမ်းတာစတဲ့အ ခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ကြာလာရင်တော့နေသားကျသွားပါတယ်။ ဘာအခက်အခဲမှမရှိတော့ပါဘူး၊ အများနှင့်အ ဆင်ပြေအောင်နေတက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
၁၂။ Diploma ပြီးတဲ့အခါ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် အနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်း။
လောလောဆယ်တော့ အလုပ်ပဲဆက်လုပ်ပါအုံးမယ်။ အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုရှာဖွေပြီး အားတဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
၁၃။ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်။
အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင်ယူနေပါတယ်။ ရိုးသားပြီးကြိုးစားတဲ့လူကောင်းတစ် ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။
၁၄။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပညာသင်ရင်းနဲ့ Life Career ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အကြာင်းရင်း။(မှတ်ချက်။ ။ ဘ၀မှာအရေး ကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့လဲ။ လူငယ်တွေအတွက်လည်း အကြံပြုချက်များမျှဝေပေးပါ။)
၀ါသနာမပါတာကတော့ အဓိကအကြောင်းရင်းပါ။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တော့စိတ်ပျော်တယ်။ ကိုယ့် အတွက်ရောအများအတွက်ရော အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပြီး ဘ၀ကိုပျော်ပျော် ရွင်ရွင်နေသွားချင်တယ်လေ။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကတော့ အခက်အခဲတွေကြားကညိုယူရတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ လဲမိသားစုကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ကျွန်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ ၀ါသနာကိုအရင်းခံတဲ့ ပညာရေး လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးချယ်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၁၅။ KDU (ပီနန်) University တွင်ရှိသည့် ဘာသာရပ်များထဲမှ International Hotel & Tourism Management ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြာင်းအရင်း။
အလုပ်အကိုင်ပေါများတယ်၊ လူတန်းစားပေါင်းစုံထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်တယ်၊ လေ့လာစရာများတဲ့ အတွက် သင်ယူစရာတွေမကုန်ခမ်းဘူး၊ လူ့ဘ၀အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်။
No. 234, 2nd Floor (R), Shwebontha St (Mid Blk), Pabedan Township, Yangon, Myanmar. Fax : 951-250929
Tel : +951-389 915 , 250929 Hp : 95-9-5103915
Email : myanmarsearchinternational@gmail.com
Curtin University (Malaysia)
Curtin University (Singapore)
Webster University(Thailand )
SEGi University (Malaysia)
Sunway University (Malaysia)
Limkokwing University (Malaysia)
PSB Academy (Singapore)
Highline Community College (USA)
University of Newcastle ( UON )
All rights reserved © 2014 Myanmar Search International. Powered by PROMAX Technology